Isihluzo se-Osmosis se-aquarium, yonke into ekufuneka uyazi. Yeyiphi oza kuyithenga? | Ngeentlanzi
Omnye wemibuzo emikhulu kuyo nayiphi na i-neophyte kwi-aquariums inento yokwenza neyona nto ibaluleke kakhulu apho iintlanzi zihamba khona, amanzi. Kungenxa yoko le nto izihluzo ze-aquarium osmosis sisihloko esikhulu sengxoxo kunye nendlela entle yokugcina iintlanzi zakho zisempilweni.
Emva koko siza kuthetha Zonke iintlobo zezihloko ezinxulumene nefilitha ye-osmosis ye-aquariumUmzekelo, yintoni amanzi e-osmosis, yintoni umahluko nge-reverse osmosis okanye izibonelelo zokuba nefilitha enje kwi-aquarium yethu. Ukongeza, ukuba unomdla kwesi sihloko, sicebisa ukuba ufunde elinye inqaku malunga Isihluzo se-Eheim.
1 Iifilitha ze-osmosis ezilungileyo ze-aquariums
2 Yintoni amanzi e-osmosis kwii-aquariums?
3 Yintoni isihluzo se-osmosis kwi-aquarium?
3.1 Isebenza njani isihluzo se-osmosis?
4 Isihluzo samanzi se-osmosis sihlala ixesha elingakanani?
5 Izibonelelo zokuba nesefile ye-osmosis ye-aquarium
6 Kwezinye iimeko kufuneka ndisebenzise isihluzo se-aquarium osmosis?
7 Ngaba isihluzo se-osmosis siyafana nesihluzo se-osmosis esibuyela umva?
8 Ngaba ungayenza i-osmosis ye-aquarium etyaliweyo?
Iifilitha ze-osmosis ezilungileyo ze-aquariums
Inkqubo yokuhluza amanzi ...
Inkqubo yeFRIZZLIFE ye ...
I-ARKA Aquatics myAqua190 ...
Yintoni amanzi e-osmosis kwii-aquariums?
Ukuqonda ukuba yintoni i-osmosis yamanzi ye-aquarium, Kufuneka siqale siqonde ukuba amanzi angena ekhayeni lethu anjani. Ke, amanzi anokuhlelwa njengabuthathaka okanye anzima, kuxhomekeke kukuxinana kweetyiwa zetyuwa. Okukhona kunzima, kokona kubi kwimpilo yentlanzi yakho… kunye nemibhobho yakho. Umzekelo, kwidolophu yam kukho uxinaniso lwekalika emanzini kangangokuba kuyafuneka ukuba ufakele isithambisi samanzi ukuba awufuni kuphelelwa yimibhobho qho emva kwesibini nangesithathu. Nditsho nebhalbhu eshaweni yayizaliswe ngamatye eekalika!
Ungacinga njani Amanzi anjalo akanconywa, nokuba kuncinci kwiintlanzi zakho. Yilapho amanzi osmotic eza emfanekisweni.
Amanzi e-Osmosis, okanye amanzi osmotized, ngala manzi asuswe kuwo onke amaminerali kunye nongcoliseko Ukuze isiphumo samanzi "acocekileyo" ngokupheleleyo, asemgangathweni ophezulu, ekucetyiswa kakhulu ukuba iintlanzi zakho ziphile zonwabile kwaye zisempilweni, into ebaluleke ngokukodwa kolu hlobo lwezilwanyana, kuba amanzi ayo Amalunga nendawo ahlala kuyo, ke kubalulekile ukuba siyenze ibe nyulu kangangoko. Ukongeza, ezi zilwanyana zibuthathaka kakhulu kwi-pH yamanzi kwaye, njengoko izimbiwa kunye nezinye izinto ezingafunekiyo zinokuwuguqula, kungcono kakhulu ukuba namanzi akumgangatho ophezulu.
Ngokuqhelekileyo le nkqubo ifezekiswa ngesihluzi se-osmosis (esiza kuthetha ngayo apha ngezantsi) kwaye akukho mfuneko yokongeza nayiphi na imichiza emanzini.
Yintoni isihluzo se-osmosis kwi-aquarium?
Isihluzo se-osmosis kwi-aquarium sivumela oko, ukufezekisa amanzi amsulwa ngokukodwa. Njengoko besesitshilo ngasentla, oku akuphumelelanga ngokongeza nayiphi na into eyimichiza, kodwa ngokucoca amanzi, ngokucacileyo, sisihluzo se-osmosis.
Isebenza njani isihluzo se-osmosis?
Ngokuyinene, Igama layo sele libonisa ukuba isihluzi se-osmosis sisebenza njani, kuba iqulethwe ngokuchanekileyo yile, luhlobo lwenwebu evumela ukuba kudlule amanzi kodwa egcina ubumdaka esithethe ngabo ngasentla ngevolumu engaphezulu kweemicron ezintlanu. Esi sixhobo sikwafaka uxinzelelo kumacala omabini e-membrane ukufumana iindidi ezimbini zamanzi: osmotized, free of all impurities, and contaminated, in which these are concentrated.
Kwakhona, kuxhomekeke kumvelisi kunokubakho ukuya ezintlanu kweefilitha ezahlukeneyo ukubamba konke ukungcola okunokwenzeka. Umzekelo, eyona ndlela ixhaphakileyo yokucoca amanzi ibandakanya:
Un isihluzi sokuqala apho iintsalela ezityebileyo zisuswe khona, njengomhlaba okanye ezinye iintsalela eziqinileyo ezikhoyo emanzini.
El icarbon filter Ivumela ukuphelisa iintsalela ezincinci ezinje ngechlorine, ityhefu okanye isinyithi esinzima, ukongeza, ikwanyusa ivumba.
Un Isihluzi sesithathu, senziwe ngekhabhon, ebizwa ngokuba yiblokhon block, linoxanduva lokuqhubeka nokuphelisa inkunkuma ukusuka kwinqanaba lesibini (iklorin, ityhefu, isinyithi esindayo ...) kunye nokugqiba ukufunxa ivumba.
Ezinye iifilitha zibandakanya inwebu yokubuyela umva ye-osmosis (Esiza kuphinda sixoxe nzulu ngazo kwelinye icandelo) eligcina naziphi na amasuntswana asele emanzini.
Kwaye ezinye izihluzi zibandakanya ukuqhuba kwamanzi ifayibha yekhokhonathi ukubonelela nge-PH elungeleleneyo kwaye ilungele iintlanzi.
Ekugqibeleni, njengenkqubo ecothayo, uninzi lwezihluzi lubandakanya idama ukuqokelela amanzi osmosis.
Isihluzo samanzi se-osmosis sihlala ixesha elingakanani?
Kuxhomekeka kumenzi ngamnye. Nazi Bacebisa ukuyitshintsha rhoqo emva kweminyaka elishumi, ngelixa kukho abanye abacebisa ukuba kwenziwe itune minyaka le..
Izibonelelo zokuba nesefile ye-osmosis ye-aquarium
Njengoko ubonile kulo lonke inqaku, ukuba ne-osmosis filter kwi-aquarium ngumbono olungileyo. Kodwa, kwimeko yokuba usenamathandabuzo, silungiselele i uluhlu olunezona zinto ziluncedo:
Njengoko besitshilo, amanzi e-osmotic kufanelekile ukuba abe kwi-aquarium, kuba uyaqiniseka ukuba kunjalo amanzi acocekileyo ngokupheleleyoOko kukuthi, ngaphandle kwesinyithi okanye izimbiwa ezinokuchaphazela kakubi impilo yentlanzi yakho.
Enyanisweni, ezi zinokuthathwa njengoluhlobo lwefilmosmosis, kuba bahlula ioksijini abayidingayo ukuze baphile emanzini kwaye bashiye ukungcola. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kangaka ukwenza umsebenzi wabo ube lula!
Olunye uncedo lokuba nesicoci se-osmosis kukuba, ngokushiya amanzi njengohlobo lwento engenanto, singongeza izongezo esizifunayo iintlanzi zethu.
Kwakhona, Amanzi e-osmosis avumela ukukhula kwe-algae kunye nezityalo zaselwandle zombini kumanzi acocekileyo nakumanzi etyuwa.
Ekugqibeleni, Amanzi osmosis anokukugcinela imali xa uthenga ii-resin okanye iikhemikhali kwi-aquarium yakho.
Kwezinye iimeko kufuneka ndisebenzise isihluzo se-aquarium osmosis?
Akufuneki ukuba, kuyacetyiswa kakhulu ukuba unayo i-aquarium kwaye ufuna ukuphucula ubomi beentlanzi zakho. Nangona kunjalo, kubaluleke ngakumbi ukuba:
Amanzi akummandla wakho akumgangatho ophantsi. Ukongeza kuGoogle, sinezinye iindlela zokufumanisa, umzekelo, ukubuza kwiholo ledolophu, ukufumana ikhithi yovavanyo lomgangatho wamanzi okanye nasekhaya (umzekelo, ukuyijonga ngokuchasene nokukhanya kunye nokukhangela umkhondo wobumdaka okanye ukuvumela iglasi enesipuni seswekile kangangeeyure ezingama-24. Ukuba emva kwelo xesha amanzi amhlophe, ayikumgangatho olunge kakhulu).
Iintlanzi zakho ziqala ukuba neempawu ezibonisa ukuba amanzi akazenzi kakuhle., njengovalo, ukucaphuka kwegill, okanye ukuphefumla ngokukhawuleza.
Ngaba isihluzo se-osmosis siyafana nesihluzo se-osmosis esibuyela umva?
Hayi nyani Inkqubo yokubuyela umva isebenza ngokungafaniyoKuba iqulathe inwebu ethi icwenge amanzi acoceke kakhulu (ukuya kuthi ga kubungakanani beemicron eziyi-0,001 kwiimeko ezininzi) ukuze isiphumo sicoceke kangangoko. Olu luhlu lucocekileyo lufezekiswa ngokufaka uxinzelelo kuxinzelelo lwe-osmotic (ngumahluko woxinzelelo owenzeka kumacala omabini e-membrane, lawo "acocekileyo" kunye "namanzi" amdaka), ukuze amanzi agqitha kwisihluzi ntumbuluko ezizodwa.
Kuyabonakala, umva osmosis yindlela yokwenza amanzi acoceke kangangoko, Esisisisombululo esihle kakhulu kwi-aquarium, nangona ineengxaki ezimbini ezinkulu.
Okokuqala, Ukubuyela umva osmosis yinkcitho enkulu emanzini, ngento engeyiyo inkqubo eluhlaza kakhulu esiyithethayo. Nangona ixhomekeke kakhulu kwizixhobo esizikhethayo, kukho ezo zivelisa ilitha enye yamanzi e-osmosis kwilitha ezisithoba zamanzi "aqhelekileyo". Into ethi kwelinye icala ibe nefuthe elikhulu kwityala lokugqibela lamanzi, ewe. Kwelinye icala, kukho abo, ngokubhekisele kwinkunkuma yamanzi ebangelwa yi-reverse osmosis, bacebisa ukuba amanzi aphindaphinde asebenzise ezinye izinto, umzekelo, ukunkcenkceshela izityalo.
Okwesibini, izixhobo zokubuyisela umva kwi-osmosis enkulu kakhulu, kuba zihlala zibandakanya itanki apho kudlula khona amanzi osmosis, into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba sihlala kwindlu encinci.
Ukuba ukhetha uhlobo olunye okanye olunye lokucoca ulwelo Kuya kuxhomekeka apho uhlala khona, iimfuno zakho kwaye, kunjalo, nezo zeentlanzi zakho.
Ngaba ungayenza i-osmosis ye-aquarium etyaliweyo?
Njengayo yonke into kobu bomi, impendulo yokwazi ukuba ungayenza i-osmosis kwi-aquarium etyaliweyo ayilula: ewe nohayi. Ukuba ne-aquarium etyaliweyo ngekhe ukwazi ukusebenzisa amanzi osmosis kuphelaKuba, ngokususa konke ukungcola, i-osmosis ikwasusa izinto ekufuneka ziphile kwizityalo.
Ngoko ke, Kuya kufuneka udibanise amanzi etephu kunye namanzi e-osmosis ukufezekisa imeko efanelekileyo apho iintlanzi nezityalo zinokuhlala khona. Ipesenti ekufuneka uyisebenzisile enye nenye iya kuxhomekeka kwizinto ezininzi, umzekelo, umgangatho wamanzi kwindawo yakho kunye nakwizityalo oza kuba nazo kwi-aquarium. Banokudinga ii-substrates ezizodwa kunye nezongezo ukuze bakhule.
Icebo lokucoca ulwelo lwe-aquarium osmosis lilizwe liphela, kodwa ngokuqinisekileyo lulongezo olukhulu ukugcina iintlanzi kwi-aquarium esempilweni. Siyathemba ukuba sikuncedile ukuba uqalise kwesi sihloko sinomdla, kubaluleke kakhulu kwiintlanzi zethu. Khawusixelele, ngawaphi amava onawo ngamanzi e-osmosis? Ucinga ntoni ngokubuyela umva kwi-osmosis? Ngaba ucebisa ngesihluzo esithile kuthi? Sishiyele uluvo!
Imithombo: I-Aquadea, VFD.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Isihluzo se-Osmosis se-aquarium, yonke into ekufuneka uyazi